China Hexagonal Wire Netting umzi-mveliso kunye nabavelisi |Shengsong
Umnatha wocingo onamacala amathandathu ukwabizwa ngokuba yiChicken wire kunye nemesh yenkukhu.Yenziwe ngocingo lwentsimbi yekhabhoni ejijwayo, umnyuli okanye igalvanized eshushu, emva koko igqunywe ngeplastiki, okanye ithafa.Umnatha wocingo onamacala amathandathu usetyenziswa egadini ukukhusela iintaka ezincinci, okanye njengenkukhu okanye izilwanyana ezincinci.
Ucingo lwenkukhu, okanye inethi yeenkukhu, ngumnatha wocingo oludla ngokusetyenziswa ukubiya imfuyo yeenkukhu.Yenziwe ngentsimbi ecekethekileyo, ethambileyo engenasici, ucingo olunzima okanye ucingo lwentsimbi yekhabhoni, enezikhewu ezimacala mathandathu.Ifumaneka nge-intshi e-1 (malunga ne-2.5cm) ububanzi, i-intshi e-2 (malunga ne-5cm) kunye ne-1/2 intshi (malunga ne-1.3cm), ucingo lwenkukhu lufumaneka kwiigeji zocingo ezahlukeneyo ngokuqhelekileyo igeji ye-19 (malunga ne-1mm yocingo) ukuya kwi-22 gauge (malunga ne-0.7) mm ucingo).
Ucingo lwenkukhu ngamaxesha athile lusetyenziselwa ukwakha iindlwana eziphangaleleyo kodwa ezingabizi mali ininzi zezilwanyana ezincinci (okanye ukukhusela izityalo nepropathi kwizilwanyana) kwaye ukubhitya kunye nesiqulatho se-zinc kucingo olufakwe amazimba lusenokungafanelekanga kwizilwanyana ezithanda ukugragrama.
Ucingo lwenkukhu, inethi yemivundla, ucingo lweenkukhu, i-rockfall netting, i-stucco mesh.
Izixhobo kunye nokhuseleko koomatshini, ucingo lomgwaqo omkhulu, ucingo lwenkundla yentenetya, ucingo lokhuseleko lwendlela eluhlaza.
Lawula kwaye ukhokele amanzi, nkqu nezikhukhula.
Khusela udonga lolwandle, udonga lomlambo, udonga lomlambo, i-pier.
Yenza eminye imisebenzi kaxakeka.
Umnatha wocingo owenziwe ngesinyithi olunehexagonal ukwenzela ukudutyulwa kwethambeka.
Umnatha wocingo onamacala amathandathu owenziwe ngesinyithi ukulungiselela uhlaza oluthambekileyo.
Umnatha wocingo olunehexagonal lwenziwe ngocingo lwentsimbi kwaye ngokulukwa lwenza isefu yocingo.Isefu yocingo isetyenziswa kakhulu kwiindawo ezininzi ngeempawu zayo zendalo.
Material: Cold galvanized, idiphu eshushu, igalvanized yombane, iPVC igqunywe ngocingo, njl.
1. Kulula ukuyisebenzisa kwaye ngokulula ithayile eludongeni kunye nesamente yokwakha.
2. Ukufakela ngokulula kwaye akukho mfuneko yezakhono ezithile.
3. Ukuxhathisa umonakalo wendalo, ukuxhathisa ukubola kunye nokukwazi ukumelana nemozulu embi.
I-4.Inokumelana ne-deformation enkulu kwaye ayiyi kudilika.
5. Ukugcina ubushushu kunye nokugquma ubushushu.
6. Ukunciphisa iindleko zothutho.
Umnatha wocingo olunehexagonal, okwabizwa ngokuba ngumnatha wenkukhu okanye umnatha wenkukhu wenziwa ngocingo oluncinci lwekhabhoni.umnatha womelele ngokwesakhiwo kwaye unomphezulu osicaba.Isetyenziswa kakhulu kulwakhiwo lwemizi-mveliso nezolimo njengoqiniswa kunye nocingo.Ikwasetyenziswa njengocingo lwekheji yeenkukhu.igadi kunye nebala lokudlala labantwana.
Kwimimandla yobunjineli, i-hexagonal wire mesh isetyenziselwa ukukhusela nokuxhasa udonga lolwandle, iinduli, indlela, ibhulorho kunye nobunye ubunjineli.
Umzi-mveliso wethu ubonelela ngeentlobo ezahlukeneyo kunye neenkcukacha ezahlukeneyo ze-hexagonal wire mesh.Nantsi i-galvanized hexagonal wire mesh, i-PVC eqatywe i-hexagonal wire mesh, i-gabion ye-mesh ephothiweyo kunye nezinye iintlobo zomnatha.
Isefu yocingo enehexagonal eyenziwe ngesinyithi
G/SQ.M Ububanzi Isilinganisi socingo (Ububanzi)
Intshi mm Ukunyamezela (mm)
1" 25mm ±3.0 0.9mm - 55 1'-2M 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18
1-1/4" 31mm ±4.0 0.9mm - 40 1'-2M 23, 22, 21, 20, 19, 18
1-1/2" 40mm ±5.0 1.0mm - 45 1'-2M 23, 22, 21, 20, 19, 18
2" 50mm ±6.0 1.2mm - 40 1'-2M 23, 22, 21, 20, 19, 18
2-1/2" 65mm ±7.0 1.0mm - 30 1'-2M 21, 20, 19, 18
PVC Coated Wire Netting eneHexagonal
Umnatha Isilinganisi socingo (MM) Ububanzi
Intshi MM - -
1" 25mm 0.7mm - 1.3mm 1'-2M
1-1/4" 30mm 0.85mm - 1.3mm 1'-2M
1-1/2" 40mm 0.85mm - 1.4mm 1'-2M
2" 50mm 1.0mm - 1.4mm 1'-2M
sikwabonelela nangezinye iinkcukacha ozifunayo
Ngaphambili: Izikhonkwane eziqhelekileyo
Okulandelayo: I-Black Annealed Wire